Soomaaliya oo dib usoo Celisay xidhiidhkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyey Dalka Kenya | Hangool News
Soomaaliya oo dib usoo Celisay xidhiidhkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyey Dalka Kenya
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u soo celisay xidhiidhkii Diplomaasi ee ay la leheyd dowladda Kenya kadib wada hadal ay yeesheen madaxda labada dal.
Dowladda federaalka ayaa jartay cilaaqaadkii Kenya 15-kii December 2020 kadib markii ay Kenya ku eedeysay inay farogelin ku hayso arirmaha gudaha ee Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al cadaala oo goordhaw la hadlay warbaahinta ayaa sheegay, in iyada oo la ilaalinayo daris wanaagga iyo xidhiidhka soo jireenka ah ee labada dal la gaadhay go’aankan.”
Soo celinta Wad shaqayntii ayaa waxaa dhex-dhexaadiyey amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, sida ay sheegtay warbahainta dowladda Soomaaliya.
Qoraal ay baahisay warbaahinta dowladda Soomaaliya oo la sheegay inay si wadajir ah usoo saareen labada dal ayaa lagu yiri “Labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xidhiidhka saaxiibtinnimo ee labada dal iyadoo lagu saleynayo mabaadi’da is-ixtiraamka ee madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed, faragelin la’aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac, sinnaanta, wax wada qabsiga iyo nabad ku wada noolaanshaha. Madaxweynayaasha labada dal waxay Amiirka Dowladda Qatar uga abaal hayaan, ugana mahadcelinayaan dadaalkii uu ka geystay arrintan.”
Ergey ka socday Qatar oo lagu magacaabo Mutlaq Al-Qahtani ayaa maanta Nairobi kula kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta, kadib dhowr maalmood oo uu ku sugnaa Muqdisho, oo uu kula kulmay madaxda dowladda.
heshiiska labada dal ayaa kusoo beegmaya xilli wali laga dhur sugayo go,aanka maxkmada caddaallada dunida ee garnaqa dacwada taasi oo bishi march ee sanadkani dhagaystay kiiska dacwada Badda ee Somaliya iyo Kenya, taasi oo ka qaybgalkeeda ay diiday dawlada kenya.